Pregorexia ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း။ Bezzia
တောရက်စ် | 11/01/2022 23:55 | ကိုယ်ဝန်
အထူးသဖြင့် ပထမအကြိမ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မသိသေးသမျှသည် မသေချာမရေရာသောကြောင့် စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေသည်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို မြင့်မားစေပါတယ်။. အချို့သော အမျိုးသမီးများအတွက်၊ ကိုယ်ဝန်ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရသည်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော်လည်း အခြားများစွာသောသူများအတွက်မူ ယင်းသည် အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိ၊ ၎င်းတွင် ယေဘူယျလက္ခဏာများနှင့် သင့်လျော်သောအမည်၊ အထူးသဖြင့် pregorexia။ ဒီရောဂါဟာ Manual of Mental Disorders မှာ မပါဝင်ပေမယ့် တခြားရောဂါတွေလိုပါပဲ။ anorexia သို့မဟုတ် bulimia နှင့်ဆင်တူသည်။၊ သည် အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ၏ anorexia ဟုခေါ်သည်။
1 Pregorexia ဆိုတာဘာလဲ။
1.1 ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတွင် အစာစားခြင်းရောဂါလက္ခဏာများ
1.2 မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် pregorexia ဖြစ်နိုင်ခြေများ
Pregorexia သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် သီးသန့်ဖြစ်ပေါ်သော အစာစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာမှာ အနာဂတ်မိခင်ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်မည်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိခင်ရော သန္ဓေသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ဤအစားအသောက်ပုံမမှန်ခြင်းသည် အခြားအလားတူ လက္ခဏာများနှင့် မျှဝေပါသည်။ ဟိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အကျွံလုပ်ခြင်း၊ ပုံမှန် အစားစားခြင်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုများ အပြင် ကယ်လိုရီ စားသုံးမှုကို စွဲမြဲစွာ ထိန်းချုပ်သည် ။.
ဒီရောဂါဟာ အရင်က အစာမစားဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယခင်က နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော သို့မဟုတ် အစာစားခြင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများဖြင့် နေထိုင်ဖူးသော အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်တတ်သည် ။ သို့သော် အတိတ်က ဤပြဿနာကို ခံစားခဲ့ရခြင်းသည် အာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလည်း အလားတူ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။.
အမျိုးသမီးတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပြောင်းလဲမှုများကို တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် မတွေ့ကြုံကြသော်လည်း၊ ပုံမှန်အရာမှာ ၎င်းတို့သည် သဘာဝအတိုင်း လက်ခံရရှိကြပြီး သင့်အတွင်း၌ ဘဝသစ်တစ်ခု ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသော်လည်း၊ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ဗိုက်ကြီးလာတာကိုမြင်ရတာ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပေမဲ့ တခြားသူတွေအတွက်တော့ ပြဿနာမဖြစ်စေဘဲ ခံစားချက်က သိပ်မရှိလှပါဘူး။ သို့သော်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာကို ကြောက်တဲ့အခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ခံရှိတယ်။pregorexia နှင့်ပတ်သက်သော ဤလက္ခဏာများ ပေါ်လာနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန် သင့်ကိုယ်ဝန်အကြောင်းကို မပြောပါနဲ့။ သို့မဟုတ် သူမနှင့်မဆိုင်သလို အစစ်အမှန်မဟုတ်သောနည်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။
တခြားသူတွေရှေ့မှာ အစာစားတာကို ရှောင်ပါ။အေးအေးဆေးဆေး စားရတာ ပိုကြိုက်တယ်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ အော့အန်အောင် လုပ်နိုင်ပေမယ့် အမြဲတမ်း သီးသန့်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင် အမျိုးသမီးကို အလွယ်တကူမြင်နိုင်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်မတက်ဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းမရှိပါက အဆိုပါလက္ခဏာများကို သတိမပြုမိနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကိုယ်ဝန်အလယ်မှာ ပိုသိသာလာပါတယ်။ဗိုက်က သိသိသာသာ တိုးလာတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ခြေထောက်၊ လက်၊ မျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် တင်ပါးတွေလည်း သဘာဝအတိုင်း ကျယ်လာပါတယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် အမျိုးသမီးတိုင်းတွင် ထပ်တူမကျသော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ထင်ရှားပါသည်။
မိခင်နှင့်ကလေးအတွက် pregorexia ဖြစ်နိုင်ခြေများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွင် ဤအစားအသောက်ပုံမမှန်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များသည် မိခင်ရော ကလေးအတွက်ပါ များပြားနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ သန္ဓေသားသည် ပုံမှန်ကြီးထွားရန် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို မရရှိပါ။ ကလေးလုပ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်းပုံမမှန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်ကွဲပြားသော အာရုံကြောဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများ၊
မိခင်အတွက်၊ pregorexia သည် သွေးအားနည်းခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ ပုံမမှန်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ bradycardia၊ သတ္တုဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း၊ အရိုးများပျက်စီးခြင်းစသည့် ဆိုးရွားသောပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာသာမက ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက သင့်ကို ရေရှည်မှာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအပြင် စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဒီရောဂါက အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် သင့်ကိုယ်ဝန်တွင် pregorexia ဝေဒနာခံစားရနိုင်သည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲ အပ်ထားဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။. သင့်ဘေးကင်းရေးနှင့် သင့်အနာဂတ်ကလေး၏ ကျန်းမာရေးအတွက်၊ အကြောင်းမှာ နောင်တွင် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်သို့ ပြန်လာနိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ပြဿနာများရှိပါက သင်သည် ပြန်ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတော့ပေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဒ » ကိုယ်ဝန် » Pregorexia၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း။